आत्मिक बेबिलोनको शुरुवात - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
जनवरी ३०, २०२२ मे १, २०१९ द्वारा प्रकाशक
प्रकाशको 14 औं अध्यायमा हामीलाई "बेबिलोन" शब्दको परिचय दिइन्छ जुन परमेश्वरको क्रोधपूर्ण न्यायको मुख्य लक्ष्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
"अनि अर्को स्वर्गदूतले यसो भन्दै पछि लागे, बेबिलोन पतन भएको छ, त्यो ठूलो सहर पतन भएको छ, किनभने उसले सबै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो व्यभिचारको क्रोधको दाखमद्य पिउन लगायो।" ~ प्रकाश १४:८
परमेश्वरले प्रकाशको पुस्तक भित्र आत्मिक दुष्टता र वेश्याको प्रमुख पहिचानको रूपमा किन बेबिलोन नाम रोज्नुभएको छ?
धर्मशास्त्रमा धेरै पुरातन राज्यहरू छन् जुन परमेश्वरका जनहरूप्रति दुष्ट र विरोधी थिए। तर मानिसहरू बन्न सक्ने अन्तिम दुष्टताको पहिचान गर्न उहाँले "बेबिलोन" नाम रोज्नुभयो। साँचो भएको दाबी गर्ने मन्त्रीले किन परमेश्वरले "बेबिलोन" लाई छुट्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
तथ्य यो हो कि सुसमाचारका प्रत्येक सेवकहरू बेबिलोनको छलबाट लिइने खतरामा छन्! किनभने प्रकाशमा बेबिलोनले विशेष गरी पछि हटेको सेवकाईको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक आध्यात्मिक नेतृत्व जुन विगतमा विश्वासयोग्य थियो।
“विश्वासयोग्य सहर कसरी वेश्या बनेको छ! त्यो न्यायले भरिएको थियो। धार्मिकता यसमा राखिएको छ; तर अहिले हत्याराहरू।" ~ यशैया १:२१
त्यसोभए यदि त्यहाँ एक विश्वासयोग्य अवस्था छ जुन एक विश्वासी व्यक्तिको पछि हुन्छ, यो कसरी र कहाँ सुरु हुन्छ ताकि म यसबाट बच्न सक्छु?
आध्यात्मिक व्यभिचार कहाँ सुरु हुन्छ?
इमानदार जो कोहीलाई, तिनीहरूले आधुनिक दिन "क्रिश्चियन धर्म" मा कडा भ्रष्टाचार देख्न सक्छन्। साँचो ईसाई धर्मलाई धर्मशास्त्रमा येशू ख्रीष्टको शुद्ध र विश्वासयोग्य दुलहीको रूपमा वर्णन गरिएको छ। साँचो ख्रीष्टियनहरू पूर्णतया पापबाट छुटकारा पाउँछन् पवित्र पाप-मुक्त जीवन बिताउन। अर्कोतर्फ बेबिलोनले ईसाई कपट वा आध्यात्मिक वेश्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ: जहाँ मानिसहरूले ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको दाबी गर्छन्, तर तिनीहरू अझै पनि शैतानले तिनीहरूलाई दिन सक्ने आनन्दहरू मन पराउँछन्। त्यसैले तिनीहरू अझै पनि झूट, धोखा, लालसा, घृणा, नराम्रो मनोवृत्ति आदिमा बस्छन्। तिनीहरूले आफूलाई आध्यात्मिक वेश्याहरू जस्तै व्यवहार गर्छन्। तिनीहरूसँग पापपूर्ण आनन्दको मूल्य छ जसको लागि तिनीहरू परमेश्वरको अनाज्ञाकारी हुन इच्छुक छन्, र शैतान त्यो मूल्य तिर्न तयार छ ताकि उसले तिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्न सकोस्।
यो बेबिलोनको अवस्था पहिले कहाँबाट सुरु भयो यदि यो कुनै समय साँचो र विश्वासीहरूबाट जन्मेको हो?
मूल मानिसहरू बाबेलको भाग बनेको धर्मशास्त्रमा पहिलो उल्लेख (अन्ततः बेबिलोन बन्ने सहर) उत्पत्तिमा छ। नूहको जलप्रलय पछि, यो परमेश्वरलाई अपमान गर्ने मानिसहरूको सामूहिक समूहको पहिलो विवरण हो। र अझै पनि तिनीहरूको नियत प्राकृतिक र मानवीय रूपमा विशिष्ट देखिन्थ्यो।
यदि हामी आफैंसँग इमानदार छौं भने, हामीमध्ये धेरैले यो कुरालाई विचार नगरी पनि उनीहरूले जस्तै व्यवहार गरेको भेट्टाउन सक्छौं। शास्त्रमा उल्लेखित विवरणलाई राम्ररी पढौं:
“अनि सारा पृथ्वी एउटै भाषा र एउटै बोलीको थियो। अनि यस्तो हुन गयो, तिनीहरूले पूर्वबाट यात्रा गर्दा, तिनीहरूले शिनारको भूमिमा एउटा मैदान भेट्टाए। अनि तिनीहरू त्यहाँ बसे। अनि तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, जानुहोस्, हामी इँटा बनाउँछौं, र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जलाऊ। अनि तिनीहरूसँग ढुङ्गाको लागि इँटा थियो, र मोर्टरको लागि स्लीम थियो। अनि तिनीहरूले भने, “जानुहोस्, हामीलाई एउटा सहर र एउटा धरहरा बनाऔं, जसको टुप्पो स्वर्गसम्म पुग्न सक्छ। र हामी हाम्रो नाउँ बनाऔं, नत्रता हामी सारा पृथ्वीमा छरपष्ट हुनेछौं।" ~ उत्पत्ति ११:१-४
मार्टेन भ्याल्केनबोर्च [सार्वजनिक डोमेन], विकिमीडिया कमन्स मार्फत
टावर निर्माण गर्न र आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न कोशिस गर्दै:
पृथ्वी ध्वस्त भएपछि त्यहाँ एउटा मात्र परिवार बाँकी थियो। त्यसैले जनताको पहिलेदेखि नै सबैसँग साझा पहिचान थियो जन्म द्वारा नूहबाट परमेश्वरको एक परिवारको रूपमा, र एक भाषा भएको।
पहिले भगवानले यस परिवारलाई जान र फलफूल हुन र पृथ्वीलाई भर्नको लागि गुणा गर्न भन्नुभएको थियो।
भगवानले इन्द्रेणीद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि उहाँले पृथ्वीलाई खानाले कहिल्यै नष्ट गर्नुहुन्न।
त्यसैले यो परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न तिनीहरूको मिशन थियो। तिनीहरूलाई परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न एक परिवारको रूपमा बोलाइएको थियो।
के चीनमा ईसाई पुनरुत्थानलाई बेबिलोनले असर गरेको छ?
आध्यात्मिक सन्दर्भमा, के चीनमा महान् पुनरुत्थान सतावटको ठूलो बाढी पछि नयाँ सुरु भएको थिएन? कम्युनिज्मले पहिले सबै धर्मलाई मेटाए, तिनीहरूले प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिकवादका धेरै विभाजनहरूलाई पनि मेटाए। त्यसोभए जब 1970 मा केवल बाइबलको ज्ञानको साथ पुनरुत्थान सुरु भयो, र कुनै बाह्य प्रभाव थिएन, चिनियाँ ईसाईहरूले आध्यात्मिक जन्मद्वारा आफूलाई सामूहिक रूपमा ईसाईहरूको एक परिवारको रूपमा मात्र चिने। तिनीहरू सुसमाचार र तिनीहरूले भोगेका कठोर सतावटहरूद्वारा परिष्कृत भएका थिए। र तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र क्रिश्चियनहरूले पृथ्वीलाई भर्न थाले, र लाखौं रूपान्तरित भएका छन्।
तर पछि प्रोटेस्टेन्टवाद र क्याथोलिकवाद भित्रका पश्चिमी सम्प्रदायहरूले तिनीहरूलाई "स्वर्गको नजिक" हुने छुट्टै पहिचान र बाटो प्रस्ताव गर्न आफ्नो प्रभाव फिर्ता ल्याए। आज तिनीहरू "उनीहरूको पुनरुत्थान जोगाउन" तिनीहरूको व्यक्तिगत चर्च विधिहरूको झूटो प्रतिज्ञाद्वारा तिनीहरूलाई फेरि विभाजित गर्न काम गरिरहेका छन्।
विधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दा वास्तवमा विगतका पुनरुत्थानहरू नष्ट भएको छ?
1700 को दशकमा त्यहाँ एक पुनरुत्थान थियो जसले जोन वेस्लीसँग जोडिएका मन्त्रीहरू मार्फत काम गर्यो। परमेश्वरको आत्माले मानिसहरूलाई नयाँ आत्मिक जन्ममा ल्याउनको लागि गृह सभाहरू र सडक प्रचारमा सञ्चालन गर्ने केही विधिहरू मार्फत काम गर्नुभयो। तर पछि अरूले परमेश्वरमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा सधैं एउटै विधिहरू प्रयोग गरेर पुनरुत्थानलाई थप जोगाउने प्रयास गर्नेछन्। अन्ततः विधिहरूमा फोकस यति प्रचलित भयो कि तिनीहरूले वास्तवमा आफ्नो वरिपरि पहिचान सिर्जना गरे र आफूलाई "मेथोडिस्ट" भनिन्। त्यसोभए जुन विधिहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई कामको समृद्धिको लागि सुरुमा आशिष् दिनुभएको थियो, पछि तिनीहरूको पहिचान बन्यो, र तिनीहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई पहिचान गर्ने तरिका बन्यो - कुनै पनि नयाँ आध्यात्मिक जन्मको पर्वाह नगरी।
त्यसैले प्रारम्भिक बेबिलोन जस्तै, भगवानले मेथोडिस्ट आन्दोलनलाई भ्रमित पार्नुभएको छ र यो आज पृथ्वीभरि धेरै फरक सम्प्रदाय पहिचानहरूमा छरिएको छ। र अन्य धेरै आन्दोलनहरूमा पनि त्यस्तै भएको छ। जसरी परमेश्वरले उत्पत्तिमा बेबिलोनलाई गर्नुभयो।
तर कुनै पनि समय वा स्थानमा काम गर्नका लागि परमेश्वरले रोज्नुभएका विधिहरूलाई धर्मशास्त्रले निम्न रूपमा पहिचान गर्छ: उपहार, प्रशासन र सञ्चालन। र यी चीजहरू विभिन्न ठाउँहरूमा र समय अनुसार फरक हुन सक्छन्:
"अब त्यहाँ उपहारहरूको विविधता छ, तर एउटै आत्मा। र त्यहाँ प्रशासनको भिन्नताहरू छन्, तर एउटै प्रभु। र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कार्यहरू छन्, तर यो एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबैमा काम गर्नुहुन्छ। तर आत्माको प्रकटीकरण हरेक मानिसलाई लाभको लागि दिइएको छ।" ~ १ कोरिन्थी १२:४-७
1800s को अन्त मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा पवित्र आत्मा को एक विशेष आन्दोलन सुरु भयो। सम्प्रदायहरूको भ्रमको कारण, नयाँ जन्ममा ध्यान केन्द्रित गर्न सन्देश प्रचार गरिएको थियो। यो सन्देशले नयाँ आत्मिक जन्ममा आधारित परमेश्वरको एउटै परिवारलाई चिनायो। फलस्वरूप यसले मण्डलीको पहिचान स्वर्गीय पिता र उहाँको पुत्रसँग मात्र राख्यो।
"यस कारणले गर्दा म हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पितासामु मेरो घुँडा टेक्छु, जसको नाम स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण परिवारको छ।" ~ एफिसी ३:१४-१५
अरू कसैलाई महिमा र पहिचान दिनको लागि, आन्दोलनले बाइबलका पत्रहरूमा प्रयोग गरिएको साधारण नाममा केन्द्रित थियो: "परमेश्वरको चर्च"। यो वास्तवमा एक विशिष्ट चर्च "लेबल" नाम होइन किनभने मूल ग्रीक धर्मशास्त्रमा यसको गहिरो अर्थ छ: "जसले परमेश्वरको आह्वानलाई जवाफ दिएका छन्" - केवल वचनको आज्ञाकारिताद्वारा आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पित गर्न। परमेश्वर र परमेश्वरको आत्मा।
प्रारम्भिक 1900s देखि परमेश्वरको पुनरुत्थान आन्दोलनको चर्चलाई के भयो?
धेरैले फेरि आफ्नो पहिचानको विशिष्टतालाई बचाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् विगतमा परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा कसरी काम गर्नुभएको छ। तिनीहरूले प्राय: आफूलाई सम्झौताबाट जोगाउनको लागि साझा असफल-सुरक्षित योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। फलस्वरूप फेरि समूह विभाजन हुन थालेको छ । र धेरै नयाँ जन्महरू र नयाँ ठाउँहरूमा "पृथ्वी भर्न" भन्दा सट्टा आफूलाई "संरक्षण र संरक्षण" मा केन्द्रित छन्।
तर परमेश्वरको आत्माको आवागमन तपाईंले फलफूल र तरकारीहरू जस्तै प्याकेज गर्न र संरक्षण गर्न सक्ने कुरा होइन।
तपाईंले विगतमा परमेश्वरको आन्दोलनको लागि मूर्ति छवि बनाउन सक्नुहुन्न, किनकि तपाईंले वर्तमानमा पवित्र आत्माको आन्दोलनलाई प्रतिक्रिया दिन बेवास्ता गर्नुहुनेछ। आजको आवश्यकताको लागि "के" र "कहाँ" र "कसरी" परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वरलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि तपाईंले आफ्नो आत्म-सुरक्षा नियन्त्रण बलिदान गर्नुपर्छ।
तर मानिसमा यस्तो के छ जसले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने र मानिसहरूलाई परमेश्वरमा जम्मा गर्नुको सट्टा आफैंमा जम्मा गर्न चाहने प्रवृत्तिलाई निम्त्याउँछ?
डर, र परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको मौलिक उद्देश्यमा अभिषेक र आत्म-त्यागको कमी। फलस्वरूप बेबिलोनी आध्यात्मिक अवस्था विरुद्धको सन्देशमा सूक्ष्म परिवर्तन हुन्छ। सन्देशको सट्टा "बाहिर आउनुहोस् र प्रभुमा भेला हुनुहोस्":
"यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ, र अलग होओ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र अशुद्ध कुरालाई नछोऊ, र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु, र तिमीहरूका पिता हुनेछु, र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान।" २ कोरिन्थी ६:१७-१८
सन्देश यस्तो हुन्छ: "बाहिर आउनुहोस् र हामीकहाँ भेला हुनुहोस्।" अन्तिम परिणाम पहिचान "भगवान" बाट "हामी", वा "परमेश्वरको" बाट "हाम्रो" मा परिवर्तन हुन्छ।
यदि तपाइँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, आउनुहोस् बेबिलोनको पहिलो शुरुवातमा फर्केर हेरौं।
बेबिलोनको सुरुवात कसरी भयो?
नूहको परिवारका सन्तानहरूले पृथ्वीलाई आफैंले भरिंदा, तिनीहरूले परमेश्वरले निर्देशन दिए अनुसार सुरु गरे। तर जब तिनीहरू विशाल मेसोपोटामिया मैदानमा प्रवेश गरे तिनीहरूले निस्सन्देह कमजोर महसुस गर्न थाले। विशेष गरी यदि यो वसन्तमा फेरि कडा वर्षा सुरु गर्नुपर्छ।
मेसोपोटामिया उपत्यकाका नदीहरू तिनीहरूका किनारहरू ओभरफ्लो हुन थाले। तिनीहरूका लागि बाढीको सामना गर्न सक्ने सामग्रीहरू सिर्जना गर्न सिक्नु आवश्यक थियो: आगो कडा इट्टा र चिल्लो जुन त्यो क्षेत्रमा बिटुमेन भनेर चिनिन्छ।
नोट: बिटुमेन एक खनिज पिच हो, जसलाई कडा पार्दा बलियो सिमेन्ट बन्छ, जुन सामान्यतया आजसम्म एसेरियामा प्रयोग गरिन्छ, र पुरातनताका अवशेषहरू जलेको इँटामा पाइने मोर्टार बनाउँछ।
मैदानमा भौतिक बाढीको सामना गर्न उनीहरूले किन इँटा र चिल्लोले बाढीबाट आफ्नो घरहरू निर्माण र जोगाउनु आवश्यक थियो। तर, जसरी उनीहरूले यसमा राम्रो गरे, उनीहरूको सोच विस्तार भयो। जति टाढा पर्खालहरू माथि गए, तिनीहरूले देख्न सक्थे। थप रूपमा, पर्खालहरू जति टाढा गयो, तिनीहरू आफैं टाढामा अरूलाई बढी देखिन्थे र त्यसैले तिनीहरूको श्रमलाई अरूले देखे र धेरै उच्च सम्मान गरे।
थप रूपमा, डर प्रायः एक धेरै प्रभावकारी प्रेरणा हो जुन मानिसहरूलाई परियोजना प्रयासमा केन्द्रित राख्न प्रयोग गरिन्छ। सायद उनीहरूले विगतको विश्वव्यापी बाढीका सम्झनाहरूलाई सदुपयोग गरेर मानिसहरूलाई उच्च निर्माण गरिरहन आवश्यक पर्ने प्रेरित गरेका थिए। तिनीहरूले सारा पृथ्वीमा फेरि कहिल्यै बाढी नआउने परमेश्‍वरको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्नुभन्दा आफूमाथि भरोसा गर्न थाले।
त्यसैले तिनीहरूले तर्क गरे: यदि हामीले गरेको काम राम्रो र साँचो आशिष् हो भने, हामी त्यही कुरा गरिरहौं: र अझ उच्च। तर लामो समयसम्म एउटै निर्माण परियोजनामा जनतालाई कसरी केन्द्रित राख्नुहुन्छ? तिनीहरू अन्ततः "जलेको" हुन झुकाव हुनेछन् र यो पर्याप्त छ भन्ने सोच्छन् र अर्को इलाकामा जान्छन्।
हामी वास्तवमा यसको जवाफ जान्दछौं, किनकि हामी पृथ्वीमा कुनै पनि मानव संस्थाको लागि "चीजहरू जारी राख्छौं" भन्ने हो। हामी एक विशिष्ट महान उद्देश्य वरिपरि एक अद्वितीय पहिचान सिर्जना गर्छौं जसले मानिसहरूलाई हामीतर्फ आकर्षित गर्नेछ र तिनीहरूलाई हामीसँग राख्नेछ। हामी यो बढ्दो मानवलाई सँगै राख्नको लागि गर्छौं किनभने हामी सुरु भएको राम्रोलाई जोगाउन चाहन्छौं, चाहे त्यो हो:
एक गैर नाफा
एउटा सहर वा सहर
र हो, केही हदसम्म, एक निश्चित स्थानीय मण्डलीको काम वा प्रयासको लागि पनि
तर परमेश्वरको राज्यमा यस प्रकारको कुरा प्रभुको बाधा र निर्देशनको अधीनमा हुनुपर्दछ, किनकि धेरै मानव संस्थाहरू, आवश्यक भए तापनि, स्वेच्छाले वा सावधानीपूर्वक आफूलाई परमेश्वरको उद्देश्यको अधीनमा राखेका छैनन्।
त्यसोभए मैदानका यी मानिसहरूले यो "बाढी-सुरक्षित" टावर निर्माण गर्न निस्कँदा, उनीहरूले आफ्नो पहिचानको दर्शन गर्न थाले जसले उनीहरूलाई बाँकीबाट अलग बनायो। उनीहरूले पहिले नै जन्मजात पारिवारिक पहिचानभन्दा बाहिरको पहिचान बनाए। अब मानिसहरूले आफ्नो ध्यान विदेशमा फैलिएर पृथ्वीलाई भर्नुको सट्टा स्वर्गको नजिक ल्याउने टावर (मानिसहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने अर्को महान उद्देश्य) निर्माणमा केन्द्रित गर्नेछन्।
यो सबै भवन भन्दा पहिले तिनीहरू बसोबास गर्ने र अग्रगामीहरू थिए, बसोबास गरेर विदेशमा फैलिए र त्यसपछि बारम्बार बाहिर निस्कन्छन्। तिनीहरूले "मिसनरी आउटपोस्ट" स्थापना गर्नेछन् र थप प्रक्षेपण गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नेछन्, र त्यसपछि बाँकी पृथ्वीलाई पुनःपूर्ति गर्न अगाडि बढ्नेछन्। तर अहिले उनीहरु बसोबास गर्ने र आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्ने र जोगाउनमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । आखिर तिनीहरूले ठूलो कुरा निर्माण गर्दै थिए, र धेरैलाई आफूतिर आकर्षित गर्दै थिए।
म विश्वस्त छु कि जीवनमा धेरै चीजहरू चेतावनी बिना हुँदैन। निस्सन्देह तिनीहरूमध्ये कोही-कोही थिए जसले आफ्नो अग्रगामी प्रयासहरू त्यागेको छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न खोजेका थिए। तर तिनीहरू बलियो विचार र असन्तुष्ट गर्ने क्षमता भएकाहरूले ओझेलमा परेका थिए।
त्यसैले अन्ततः तिनीहरूले पूर्ण रूपमा मूल दृष्टि गुमाए।
के मण्डली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु सधैं परमेश्वरको नजिक हुनको लागि एक महान कुरा होइन र?
यदि हामीले सामान्य मानव सर्तहरूमा सोच्यौं भने, यी मध्ये कुनै पनि चीजहरू जुन बेबिलोनको शुरुवातले गरेन, त्यति "दुष्ट" देखिँदैन। निस्सन्देह यदि हामीले यो टावर देख्यौं भने हामी प्रभावित हुनेछौं र यसलाई नजिकबाट हेर्न चाहन्छौं। यसले हाम्रो ध्यान र ध्यान उनीहरूतिर खिच्नेछ।
तर त्यहाँ एक गर्व छ जुन कुनै पनि कुराको वरिपरि छुट्टै पहिचान स्थापना र संरक्षण संग जान्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण: यो नयाँ पहिचान प्रभुले तिनीहरूलाई सुरुमा दिनुभएको थिएन।
त्यसोभए बेबिलोनको सुरुवात यसरी भयो, र यसलाई परमेश्वरले अझ धेरै दुष्टको सुरुवातको रूपमा चिनाउनु भएको छ - यो सम्भवतः कति टाढा जान सक्छ भन्ने कुनै सीमा बिना।
“अनि मानिसहरूका छोराछोरीहरूले बनाएको सहर र धरहरा हेर्न परमप्रभु तल आउनुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर, मानिसहरू एउटै छन्, र तिनीहरू सबैको एउटै भाषा छ। र तिनीहरूले यो गर्न थाले: र अब तिनीहरूबाट केही पनि रोकिनेछैन, जुन तिनीहरूले कल्पना गरेका छन्। ~ उत्पत्ति ११:५-६
"उनीहरूले यो गर्न थाल्छन्..." र यस प्रकारको फोकसले आज हामीलाई कत्ति टाढा ल्याएको छ। आध्यात्मिक बेबिलोनको वेश्याको बारेमा प्रकाश 17 पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले बेबिलोनको शुरुवातको पहिलो प्रयास र तिनीहरूको साझा भाषालाई भ्रमित गरेर तिनीहरूको आत्म-संरक्षण पहिचान एजेन्डा रोकिदिनुभयो। त्यसैले तिनीहरूले थप निर्माण गर्न छोडे, र तिनीहरू वास्तवमा एकअर्काबाट छरिए।
ठ्याक्कै तिनीहरूले मूल उद्देश्य के विपरीत।
त्यसोभए तिनीहरूले परमेश्‍वरको सुरुमा चाहनुभएको कुरा गर्न लागे: विदेशमा फैलिने र पृथ्वीलाई भर्ने। तर यसरी विभाजन गर्नु सधैं पीडादायी हुन्छ। यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो यदि तिनीहरूले स्वेच्छाले विदेशमा फैलिन जारी राखेका थिए, र अझै पनि एक पारिवारिक पहिचान र भाषालाई कायम राखेका थिए जुन परमेश्वरले तिनीहरूलाई जन्मद्वारा दिनुभएको थियो।
कति पटक परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई असहज परिस्थितिहरूमा तितरबितर गर्नुभएको छ ताकि तिनीहरू विदेशमा फैलिन सकून् र बचाइएका आत्माहरूले पृथ्वीलाई पुनःपूर्ति गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकून्? यदि हामीले ईमानदारीपूर्वक इतिहासभरि यसको अनुसन्धान र अनुसन्धान गर्ने हो र हामीले विवरणहरू जान्न सक्षम भयौं भने, तपाईंले हाम्रो सामूहिक व्यक्तित्व र हाम्रो विशेष समझको विवरणलाई भगवानले कत्तिको थोरै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भनेर महसुस गर्न पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ।
मसँग सोच्नुहोस्: के यो विगतका धेरै क्रिश्चियन पुनरुत्थानहरूमा समयसँगै भएको होइन? कामको संरक्षण र छुट्टै पहिचान बनाएर कामलाई जोगाउन जनता चाहन्छन् । तर हरेक पटक, आफूलाई जोगाउने र अलग राख्ने आफ्नै प्रयासले वास्तवमा पुनरुत्थानलाई अन्त्यमा ल्याउँछ। र अन्ततः तिनीहरू विभाजित हुन्छन्।
त्यसोभए हामीले बेबिलोनको सुरुवातबाट के सिक्न सक्छौं?
१. पहिलो, यदि परमेश्‍वरले बाढीले हामीलाई विनाश हुन दिनुहुनेछैन भनी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने, उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्! पाखण्डको बाढीबाट आफ्नो आत्मरक्षा बाहेक अरू केही निर्माणमा आफ्नो समय र स्रोतहरू खर्च नगर्नुहोस्। यदि हामी साँच्चै उहाँको सेवा गर्दैछौं भने, येशूले हामीलाई कपटलाई जित्न मद्दत गर्न सधैं हाम्रो साथमा रहने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्!
"अनि येशू आउनुभयो र उनीहरूसामु बोल्नुभयो, र भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै शक्ति मलाई दिइएको छ। यसकारण जानुहोस्, र सबै राष्ट्रहरूलाई सिकाउनुहोस्, तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिनुहोस्: तिनीहरूलाई मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुराहरू पालन गर्न सिकाउनुहोस्: र, हेर, म सधैं तिमीहरूको साथमा छु। , संसारको अन्त्य सम्म पनि। आमेन।" ~ मत्ती २८:१८-२०
नूहका सन्तानहरूले मौसमी बाढीबाट जोगाउन आफ्नो घरको वरिपरि पर्खाल बनाउनु उचित हुने थियो। तर स्वर्गमा पुग्नको लागि एउटा टावर पूर्ण रूपमा अनावश्यक थियो। केवल "आवश्यक चीजहरू" (प्रेरित 15:28) एक स्थानीय कार्य स्थापना गर्न र सत्यता कायम राख्नको लागि साँचो ईसाई जीवन र परमेश्वर र उहाँको पवित्र आत्मासँगको सम्बन्धलाई कायम राख्न। डरमा नदिनुहोस् र थप थप्नुहोस्।
2. दोस्रो, यदि तपाईं पापबाट छुटकारा दिने नयाँ जन्मद्वारा परमेश्वरको परिवारको हिस्सा हुनुहुन्छ भने: क्रिश्चियन व्यक्तिको रूपमा, न त क्रिश्चियनहरूको स्थानीय मण्डलीको रूपमा आफूलाई विशिष्ट रूपमा पहिचान गर्न अरू केही थप्ने प्रयास नगर्नुहोस्। जब तपाइँ गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको पहिचान योजना मा नमिल्ने अरुलाई बहिष्कार गर्नुहुन्छ, र तपाइँ महिमा गर्न को लागी एक पहिचान गर्व निर्माण गर्न सुरु गर्नुहुन्छ।
प्रेरित पावलले हामीलाई यसको विरुद्धमा चेतावनी दिएका थिए, र हामीले बरु ख्रीष्टको क्रुस मार्फत हामीलाई देखाइएको बलिदान प्रेमसँग चिन्नुपर्दछ। र क्रुस हामी उहाँको लागि बोक्न चाहन्छौं।
"तर परमेश्‍वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा बाहेक, जसद्वारा संसार मेरो लागि क्रूसमा टाँगिएको छ, र म संसारको सामु म महिमा गर्न नपरोस्।" ~ गलाती ६:१४
एक मन्त्रीको रूपमा, यदि तपाईंले बेबिलोनको यी साधारण सुरुवातहरूलाई बेवास्ता गर्न ध्यान दिनुभएन भने: तपाईंले आफ्नै क्रिश्चियन पहिचान बनाउन सुरु गर्नुहुनेछ। त्यसकारण तपाईंले बेबिलोनी आत्माको अर्को सुरुवातको गठन सुरु गर्नुहुनेछ।
ख्रीष्टियनहरू बाहिर जान र गुणा गरेर पृथ्वीलाई भर्नको लागि परमेश्वरको आदेश हो।
"तिमीहरू सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर।" ~ मर्कूस १६:१५
तर आज, “बेबिलोनबाट अलग” भएको दाबी गर्नेहरूमध्ये के भइरहेको छ? तपाईंले नयाँ काम स्थापना गर्नको लागि कसैलाई पठाउनुभएको अन्तिम पटक कहिले हो, विशेष गरी सुसमाचार नसुनेको ठाउँमा?
दुई पटक प्रकाश सन्देशले बेबिलोन विरुद्धको न्याय सन्देश सारा संसारमा लैजानु पर्छ भनेर आदेश दिन्छ।
"अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तपाईंले धेरै मानिसहरू, राष्ट्रहरू, भाषाहरू, र राजाहरूका सामु फेरि अगमवाणी गर्नु पर्छ।" ~ प्रकाश १०:११
“अनि मैले अर्को स्वर्गदूतलाई स्वर्गको बिचमा उडिरहेको देखें, जससँग पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई, र हरेक जाति, नातागोता, भाषा र मानिसहरूलाई प्रचार गर्नको लागि अनन्त सुसमाचार छ, ठूलो स्वरमा, परमेश्वरसँग डराऊ। र उहाँलाई महिमा दिनुहोस्। किनभने उहाँको न्यायको घडी आइपुगेको छ: र उहाँलाई आराधना गर जसले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका झरनाहरू बनाउनुभयो। अनि अर्को स्वर्गदूतले यसो भन्दै पछ्याए, “बेबिलोन पतन भएको छ, त्यो ठूलो सहर ढलेको छ, किनकि उसले सबै राष्ट्रहरूलाई आफ्नो व्यभिचारको क्रोधको दाखमद्य पिउन लगायो।” ~ प्रकाश १४:६-८
त्यसोभए प्रभुको आज्ञामा व्यस्त मन्त्रीहरूको यो दल कहाँ छ? के तिनीहरू नयाँ इलाकामा कूच गर्दै छन्, विभाजनको पर्खाल भत्काइरहेका छन् र पाखण्डलाई जरैबाट हटाइरहेका छन्? वा के तिनीहरूले आत्मरक्षा गर्दै र सुरक्षित गरिएकाहरूलाई छुट्याएर आफ्नो अद्वितीय समूह पहिचान सिर्जना गरिरहेका छन्? त्यसोभए के परमेश्वरले पहिले नै तिनीहरूको भाषा भ्रमित गरिदिनुभएको छ र चर्च भएको दाबी गर्नेहरूलाई विभाजित गरिदिनुभएको छ: बेबिलोनको सुरुवातको कारण?
आध्यात्मिक रूपमा बेबिलोनको भाग भएका मानिसहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा भनेको केवल धार्मिक हुनु र पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा आउनु हो। पतित मण्डलीलाई फेलोशिप नगर्नुहोस् जहाँ मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा पापले बाँधिएर पनि राम्रो महसुस गर्न भेट्ने धार्मिक मानिसहरू भन्दा बढी होइनन्। छुटकारा पाउनुहोस् र येशू ख्रीष्टको मुक्तिको पूर्ण योजना (शास्त्रमा पहिचान गरिएको) मार्फत तपाईंको हृदय र दिमागमा साँचो पवित्रता फेला पार्नुहोस्।
"यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ, र अलग होओ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र अशुद्ध चीजलाई नछुनुहोस्; र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु, र तिमीहरूका पिता हुनेछु, र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान् परमप्रभु भन्नुहुन्छ।” ~ २ कोरिन्थी ६:१७-१८ (प्रकाश १८:४ पनि हेर्नुहोस्)
"...परमप्रभुले तिनीहरूलाई जान्नुहुन्छ जो उहाँका हुन्। र, ख्रीष्टको नाउँ लिने हरेकले अधर्मबाट अलग होस्।” ~ २ तिमोथी २:१९
तर दुर्भाग्यवश, आज धेरैले "परमेश्वरमा आउनुहोस्" लाई "हामीकहाँ आउनुहोस् र हामीले बनाएको हाम्रो विशेष पहिचान हो, त्यसैले हामी छरपष्ट हुने छैनौं" भन्ने अंशलाई बदलेका छन्। (बेबिलोनको शुरुवात जस्तै।)
त्यसोभए परमेश्वरले "हामीकहाँ आउनुहोस्" मानिसहरूलाई अझ साना समूहहरूमा विभाजन गरेर कति पटक लज्जित गर्नुभएको छ?
त्यसोभए हामी कसरी बेबिलोनलाई फेरि निर्माण गर्नबाट जोगिन सक्छौं?
"हामीकहाँ आउनुहोस्" मानिसहरूले पहिले प्रेरित १५ बाट सिक्नुपर्छ र पवित्र आत्मालाई उहाँका मानिसहरूलाई मुक्तिद्वारा चिन्न र उनीहरू सबैलाई थाहा भएको साझा गीत अभ्यास गर्न अनुमति दिनुपर्छ: "हामी प्रत्येक रगत धोएकालाई सङ्गतिमा आफ्नो हात पुग्छौं।" तिनीहरू आवश्यक चीजहरूको बारेमा मात्र चिन्तित हुनुपर्छ (प्रेरित 15:28 हेर्नुहोस्), र परमेश्वरलाई बाँकीको हेरचाह गर्न अनुमति दिनुहोस्! "उनका मेरा मानिसहरूबाट बाहिर आउनुहोस्, र झूटोपनबाट आफूलाई अलग गर्नुहोस् - र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु - परमेश्वरकहाँ आउनुहोस्" मा फर्कनुहोस्।
जब हामी मानिसहरूलाई हामीलाई बोलाउँछौं, हामी समूहहरू बनाउँछौं। जब हामी अरूहरू जस्तै बन्न "हामीलाई" बलिदान गर्छौं (हेर्नुहोस् १ कोरिन्थी ९:१८-२७), हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरमा बोलाउन थाल्छौं, र यसैले हामी परमेश्वरको मण्डली निर्माण गर्न थाल्छौं। किनभने मूलमा "परमेश्‍वरको मण्डली" शब्दको अर्थ यही हो: "परमेश्वरलाई बोलाइएको"।
प्रत्येक मन्त्रीले आत्म-सुरक्षाको अत्याधिक जोडलाई रोक्न सक्छ, केवल आवश्यक चीजहरू चाहिन्छ, प्रत्येक रगत धोएर आफ्नो हातहरू पुन: प्राप्त गर्दछ, र "हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सारा संसारमा जानुहोस्!" मा फर्कनुहोस्! भगवानको पहिचान पर्याप्त हुन दिनुहोस्, र यसलाई एक्लै छोड्नुहोस्! येशू ख्रीष्टलाई सबै कुरामा र सबैका लागि राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुन अनुमति दिनुहोस्।
कोटीहरू7औं तुरही, बेबिलोन, झूटा पूजा, प्रकाश १४ ट्यागहरू वेश्या, इतिहास, मन्त्रालय पोस्ट नेभिगेसन
144,000 तिनीहरूको बुबाको नामको साथ छाप